Idilesi ye-IP 192.168.8.1 isetyenziselwa imbalelwano ngaphakathi kothungelwano lomntu kunye neenkqubo ezahlukeneyo. Ikwasetyenziswa xa kuqala inkqubo yokungena ngemvume ukucacisa izixhobo zenethiwekhi. Ukufikelela kwi-192.168.8.1 faka i-Ip kwibhar yedilesi yesikhangeli sakho sewebhu, okanye ucofe ikhonkco elingezantsi.
192.168.8.1 Ukungena kuLawulo
Ngelixa inethiwekhi yobuqu, oko kuthetha ukuba inokuba yeyabanini bayo ngaxeshanye ngokulandelelana kwe-serial kwiinethiwekhi ezahlukeneyo. Ii-PC ezingenalo unxibelelwano lwenethiwekhi kufuneka zilungele i-intanethi nganye ye-TCP okanye ye-IP protocol.
Ungangena njani kwi-192.168.8.1?
Idilesi ye-IP ibalulekile xa unqwenela ukungena kwi-router yakho. Inyathelo lokuqala kukufikelela kwezinye izikhangeli zewebhu kwaye ufake ifayile https://192.168.8.1 ikhonkco kwibhokisi ye-URL yebhrawuza ngoku cinezela 'faka ngundoqo.
Kuvula iwindow entsha ekhuthaza ukuba ungene kwii-ID. Uya kuthi emva koko usebenzise iidiploma zokungena ngokungagqibekanga ukufumana ukungena kwi-interface yomzila.
Emva kokuba indlela yokungena ichuma, uya kusiwa kwiphepha lasekhaya le-router. Kwiphaneli yokulawula, unokutshintsha inani lezicwangciso ukuze zitshatise inethiwekhi kunye nokhuselo lwangaphambili.
Ukutshintsha idilesi ye-IP yakho akukhuthazwa ukuba kusenziwa ngugqirha ofundileyo.
Ulibale igama lomsebenzisi le-IP kunye nedilesi yephasiwedi?
Ukuba uyalibala i-192.168.8.1 Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha emva koko unokukhangela iManyuwali / iBhokisi yomzila. Unokukhangela uluhlu lwethu lwee-router zamagama abasebenzisi kunye neepassword.
Ukuseta kwakhona iRouter
Ukuba utshintshe igama lomsebenzisi / ipassword emiselweyo kwaye ulibale, ekuphela kwendlela yokubuyisela ukufikelela kukuseta kwakhona i-router kulungelelwaniso olungagqibekanga, oluya kubuyisela lonke utshintsho kuseto olungagqibekanga. Ukusetha kwakhona i-router yakho:
Thatha into ekhombayo, njengenaliti okanye iklip yephepha, kwaye ujonge iqhosha lokuseta kwakhona kumqolo we-router yakho.
Uya kufumana iqhosha elincinci eliyimfihlo. Cinezela kwaye ubambe iqhosha ngento enesalathiso kwimizuzwana eli-10-15.
Oku kuyakubuyisela lonke utshintsho olwenziwe lwaya kuqala, kubandakanya igama lomsebenzisi / iphasiwedi oyitshintshileyo. Ungangena ngemvume usebenzisa iziqinisekiso zakho zokungena ngokungagqibekanga.
Ukusombulula ingxaki kwidilesi ye-IP 192.168.8.1
Kuqhelekile kwinqanaba elithile ukuhlangabezana neengxaki ezahlukeneyo kwi-router yakho. Ukuba awukwazi ukudlula kwiscreen sokungena, kufuneka ukhumbule ezinye izinto. Qinisekisa ukuba i-intanethi ihlala izinzile kwaye ayitshintshi. Enye inketho kukusebenzisa i-Command Prompt ukwenza isigqibo ngesango elingagqibekanga. Idilesi ye-IP engachanekanga onokuyisebenzisa ukufikelela kujongano lomsebenzisi. Unokuqhagamshelana nomboneleli wesevisi ye-intanethi ukuze ufumane uncedo olungaphezulu.
'192.168.8.1Idilesi ye-IP efihliweyo. Le yidilesi ye-IP eyaziwayo umzekelo '192.168.0.1' & '198.168.0.1' kuba inemisebenzi efanayo naleyo yesi-2 eshiyekileyo kuphela umahluko kukuba i '192.168.8.1' ayisetyenziswanga ubuninzi beenkampani zendlela. Iifemu ezinjengeMediaLink, iHuawei isebenzisa le dilesi yeProtocol.
Kuya kufuneka uqaphele ukuba zonke iirouters zibandakanya iintlobo ezimbini zeedilesi ze-IP. Idilesi ye-IP ifunyenwe kwinethiwekhi yendawo ebizwa ngokuba yi-LAN IP idilesi kwaye enye yabelwe yimodem ebizwa ngokuba yi-WAN IP address. Idilesi ye-IP '2' ihlala isetyenziselwa ukufikelela ekusebenzeni kwendlela. Idilesi ye-IP yobuqu isetyenziselwa ukumiselwa kwesixhobo senethiwekhi.
Ekuqaleni ungayifumana njani idilesi ye-IP yomzila.
Okokuqala, qhagamshela umzila wakho kwiPC okanye nasiphi na esinye isixhobo ngokuchanekileyo. Ufuna ukwazi ukuba ukuvula ipaneli yomlawuli wendlela ofuna ukuba uqhagamshele kwi-router ngokufanelekileyo. Kwaye awufuni naluphi na uhlobo lonxibelelwano lwe-intanethi koku.
Ke, kuya kufuneka usebenzise idilesi ye-IP ye-router yakho. Ungachonga idilesi ye-IP yendlela yakho ngokundwendwela umyalelo wokuyalela kwiLaptop.
Indlela eyahlukileyo yokundwendwela idilesi ye-IP ye-192.168.8.1
Usenokutshintsha idilesi ye-IP ye-IP nangaliphi na ixesha ngeendlela ezi-2 ngokuvula i-CD ethile yokuseta enye ngokusebenzisa i-web- interface. Kubalulekile kuthi uninzi lwethu kuba uninzi lwabathengi lufuna ukuqinisekisa ukuba akukho 192.168.8.l idilesi engqubanayo nayo nayiphi na enye idilesi yesixhobo. Ukuba nabani na uyalibala idilesi ye-IP yamva nje, unokuphinda asete kwakhona umzila kwaye yonke loo nto iya kuphinda iqale kwakhona ngokungagqibeki. Ukongeza, nabani na unokufumana idilesi ye-IP ekwabelwana ngayo ngokufuna nje "i-IP yam" kwindawo yokukhangela kuGoogle. Ngokuqinisekileyo, iya kubuyela kwidilesi ye-IP ekwabelwana ngayo.
Okwangoku yiya kwisikhangeli sakho esingagqibekanga okanye isikhangeli esithile esahlukileyo emva koko ungene kwibar yedilesi ye-IP https://192.168.8.1 kwindawo yedilesi yesikhangeli. Oku kuya kukukhokelela kwisiza esithile kwaye kukungenise ukungena ngemvume kwiphaneli yomlawuli wendlela.
Apha, kufuneka ubhale igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo lomzila wakho ukuze ungene kwipaneli yolawulo lwendlela onokuthi uguqule iindlela ezininzi ezinje ngeProxy, ukhetho lokhuseleko, ulawulo lwenethiwekhi, useto lweWLAN, isoftware yomgaqo nokunye okuninzi.
Ukuba awukhumbuli igama lomsebenzisi kunye ne-password ye-password ukuba wenzeni?
Abantu abaliqela abanakho ukukhumbula amagama abo kunye negama lokugqitha. Ke ngoko kukho inkcazo kwabo babewukhumbulayo wabo Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Kunokubakho imeko apho ungakhumbuliyo amagama abasebenzisi kunye neepaski. Kwimeko enjalo, kuya kufuneka uyizingele kwi-brand ye-router kunye nenombolo yochungechunge lwe-router kunye nedilesi yokungena.
Ityala elinye elinokubakho kusenokwenzeka ukuba usilele ukukhumbula iphasiwedi yakho. Ke, kuya kufuneka usete kwakhona useto lwe-router ngesitshixo sokusetha ngasese kwi-router.
Elinye ityala kunokwenzeka ukuba awuzange uzitshintshe iziqinisekiso zakho zokungena kwi-router ukuze ujonge eyakho Ukungena ngemvume okungagqibekanga Izazisi kumnatha.
Ngoku ukuba uyazazi iinkcukacha zokungena kwi-router, ungabhala kwii-ID zendlela yakho kwiphepha lewebhu kwaye uyafumaneka kwipaneli yomlawuli wendlela.
Usenokuseta kwakhona i-router ngekhasi lasekhaya elisekwe kwiwebhu.
Ekugqibeleni, ucacisile amanqaku aliqela malunga 192.168.8.1 Idilesi ye-Intanethi. Kukho ulwazi oluninzi kwii-routers, iimodem ezingenazintambo, iidilesi ze-IP, kunye nokunye okuninzi okunikwe kule ndawo. Le dilesi ye-IP iyakunceda ekuqwalaseleni uthungelwano lwebhendi ebanzi endlini ngaphandle kokujongana nemicimbi emininzi. Ndiyathemba ukuba oku kube luncedo kuni nonke ukufikelela kunethiwekhi yomzila wakho kwaye ngokuqinisekileyo inyuse ulwazi lwakho kwidilesi ye-IP.